माधवकुमार नेपाललाई मतपत्र पट्याउने हेक्का रहेन – Everest Dainik – News from Nepal
माधवकुमार नेपाललाई मतपत्र पट्याउने हेक्का रहेन
रौतहट, असोज २ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गृह जिल्ला रौतहटबाट मतदान गरेका छन् । उनले रौतहटको गौर नगरपालिका–२ स्थित जुद्ध मावि केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन् । तर माधवकुमार नेपालले मतपत्र पट्याउने क्रममा हेक्का राखेनन । जुन फाेटाेमा देखिन्छ ।
रौतहटको गौर नगरपालिकास्थित जानकी कन्या प्रावि मतदान केन्द्रमा मतदान गरेर पत्नी गायत्री नेपालसहित बाहिरिएका एमाले नेता नेपालसँग सम्पर्क गर्दा उनी कार्यकर्ता र जनताकै बीचमा थिए । नेता नेपाल मतदान गरिसकेपछि भोजपुरी भाषामा स्थानीयसँग कुरा गरिरहेका थिए ।
‘तपाईले मतपेटिकामा मतपत्र हाल्दै गरेको फोटो त भाइरल भइसक्यो नि’ यसो भन्दा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले प्रश्न गरे- हो र ? किन हो ?
चुनाव चिन्ह देखिने साइडबाट मतपत्र पट्याएको र त्यो उल्टो भएको भन्ने टिप्पणीबारे सुनाएपछि एमाले नेता नेपालले त्यसबारे प्रष्ट पारे । उनले भने- ‘मैले सोचविचार गरेरै त्यसरी पट्याएको हो । सुल्टो पट्याउँदा मसी लत्पतिने अवस्था देखियो । मैले मतदान गरेको ठाउँमा त्यस्तो देखियो ।’
त्यसोभए निर्वाचन आयोगले स्वस्तिक छाप लगाउन प्रयोग गरेको मसीको गुणस्तर कमजोर हो त ? यदि यस्तो हो भने अरुले प्रयोग गरेको मतपत्रमा पनि मसी लत्पतिने पो हो कि ?
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको अभिव्यक्तिले निर्वाचन आयोगले प्रयोग गरेको मसीको गुणस्तरबारे गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
ट्याग्स: madhab kumar nepal